We Fight We Win. -- " More than Media ": ဘာကြောင့်လဲ ။ ဘယ်သူကြောင့်လဲ
ဘာကြောင့်လဲ ။ ဘယ်သူကြောင့်လဲ
ခရစ်ယန် နိင်ငံတွေမှာ တရိစ္ဆာန်တွေကို နိပ်စက်ညှင်းပန်းမဲ့သူမရှိဘူး။
အိနယဟင်ဒီနိင်ငံမှာ တရိုစ္ဆာန်တွေကို နိပ်စက်ညင်းမပန်းမဲ့သူမရှိဘူး
မူစလင်နိင်ငံမှာ တရိစ္ဆာန်တွေကို သူတို့ စားဖို့ အတွက် ဟာလာလုပ်တာကွဲလို့နိပ်စက်ညင်းပန်းမဲ့ သူမရှိဘူး။
ငါဒို့ဗုဒဘာသာမြန်မာနိင်ငံမှာ တရိစ္ဆာန်တွေကို ဘာကြောင့်နိပ်စက်ညင်းပန်းသတ်ဖြတ်စားသောက်မှုတွေခံနေရပါသလဲ။ တောတရိစ္တာန် ပေါင်းစုံ မျိုးတုန်း ပျောက်ကွယ်သလောက်ဘာကြောင့်ဖြစ်လာရပါသလဲ။
မူစလင်နိင်ငံမှာ လဲ တယ်လီဖုန်းကို ကြိုက်သလောက်ဝယ်လို့ ရတယ်။ ခရစ်ယန် နိင်ငံမှာလဲ ဖုံးကို ကြိုက်သလောက်ဝယ်လုို့ ရတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ဗုဒဘာသာမြန်မာနိင်ငံမှာ တယ်လီဖုန်းလူတိုင်း ၀ယ်ယူခွင့်မရကြတာလဲ ။
ဘာကြောင့်လဲ ။ ဘယ်သူကြောင့်လဲ။
ခရစ်ယန် နိင်ငံမှာလဲ Bombကို ကြိုက်သလောက်ဝယ်လုို့ ရတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ဗုဒဘာသာမြန်မာနိင်ငံမှာ Bomb လူတိုင်း ၀ယ်ယူခွင့်မရကြတာလဲ ။
အေး...ငါတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ မင်းပြန်လာရင် တစ်ကိုယ်လုံး ဟာလာ လုပ်ဖို့ စောင့်နေတဲ့ကောင်တွေချည်းပဲ
'မူစလင်နိင်ငံမှာ တရိစ္ဆာန်တွေကို သူတို့ စားဖို့ အတွက် ဟာလာလုပ်တာလွဲလို့နိပ်စက်ညင်းပန်းမဲ့ သူမရှိဘူး။'
အရေးအသားအရမ်းကောင်းတယ်ဗျာ၊ ကျွန်တော်သာမူစလင်ဆို ခင်ဗျားကိုဆရာတင်မှာပဲ့ 'စားဖို့ အတွက် ဟာလာလုပ်တာလွဲလို့' တဲ့ သြော်၊ သြော်၊ သြော်.............
25 April 2013 at 19:51
ခင်ဗျားတို. မြွေပွေး ကြောင့်ပဲ။
What the fucking your idea is! Why are you trying to discriminate among the religions. "You are good for nothing" for Myanmar.
26 April 2013 at 03:18
Hi mother fucker Mo the zwan. you are really insane and stupid bitch. you should not post such ridiculous message on the blog. it means that you reveal your true stupid character and personality. do not be too foolish like baster.
မှန်ရှေ့သွားလျှင် မှန် အရိပ်ပေါ်မည်။
သောင်ပြင် (သို့) အခန်းကျယ်ကျယ် တခုမှာ "ဟေ့ဘယ်သူလဲ" မေးလျှင်၊ သင်မေးတဲ့ အတိုင်း ပြန်မေးသံ ကြားရမည်။
လမ်းလျှောက်သွားလျှင် လှမ်းတိုင်း၊ လှမ်းတိုင်း ခြေရာကျန်ပါသည်။
ခြေရာ တန်ပြန်သက်ရောက်မှု ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်
“သက်ရောက်မှုတိုင်း တွင် တန်ပြန်သက်ရောက်မှု ရှိသည်” ဆိုသော နူယူတန် ဆိုသူမှ
ထို့ကြောင့် အမှန်တရား(သိပ္ပံနိယာမ) တခု ပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။
ပြုလုပ်တဲ့ အကြောင်းကြောင့်၊ တန်ပြန်တဲ့ အကျိုး ဖြစ်တာပါ။ အကြောင်းတရား မရှိရင်၊ တန်ပြန် အကျိုးတရား မရှိ နိုင်ပါဘူး၊ ရှင်းနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် လက်တွေ့ ကျတဲ့
လက်တွေ့မှာ သင်တွေ့နေပြီ ဆိုလျှင်၊ တွေးကြည့်ပါ။
အပြုအမူ ပြုလုပ်တိုင်း၊ (ပြုလုပ်တဲ့ အကြောင်းတရား) ကြောင့်သာလျှင်၊
ထိုကြောင့် မလုပ်အပ်သည့် အရာတိုင်း၊ သင်ပြုမူလျှင် ပြုမူသည့် အတိုင်း ပြန်အကျိုးခံစားရမည်။
ရှောင်ရန် ၅ မျိုး၊
(၁) သူတပါး အသက်သတ်ခြင်း၊
(၂) သူတပါး ပစ္စည်းခိုးယူခြင်း။
(၃) သူတပါး သားမယား ပြစ်မှားခြင်း။
(၄) သူတပါး အားလိမ်ညာ ပြောဆိုခြင်း။
(၅) သေရေ သေရက် သောက်သုံးခြင်း။
ဤ ငါး မျိုးသည် မိမိ၏ လိုချင်လို့ ဖြစ်ပေါ်မှု၊ နှင့်၊
အလိုမပြည့် ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်မှုတွေကြောင့်တာ
္ကအထက်ပါ (၅)မျိုးလုံးသည် သူတပါး အကျိုးကို လိုလားခြင်းပေါ် အခြေခံပါသည်။
အတ္တ (ကိုယ့်အကျိုး) ကို စွန့်နိုင်သူသာ လိုက်နာနိုင်ပါမည်။
သူများအသက်ကို ရက်ရက်စက်စက် (အလိုမကျမှုကြောင့်) သတ်ချင်တဲ့စိတ်၊ နဲ့ ကျန်တဲ့ (၄)မျိုး ရင်ထဲမှာ ဖြစ်ပေါ်တိုင်း၊
မနောကံ(စိတ်မှ ကြံစည်မှု ပြုလုပ်ခြင်း)စဖြစ်ပါတယ်။
ထိုမှတဆင့် နှုတ်ဖြင့် ပြောဆိုခြင်း၊ နှင့် (သို့) ကိုယ်ကာယဖြင့် ပြုလုပ်ခြင်း၊ လုပ်ကြပါတယ်။
ဤ ပြုလုပ်ခြင်း သုံးမျိုး၏ ပထမ အစသည် စိတ်မှ ကြံစည်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးမှ တဆင့်ပြီးတဆင့် ကိုယ်ထိ လက်ရောက်ကျူးလွန်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းဖြစ်စဉ်တွင် စိတ်နှင့်ကြံစည်မှု မှစ၍ ပင်လျှင် အပြစ်(အကုသိုလ်)ဖြစ်ပါသည်။ ဤ အပြစ် ရင်မှာဖြစ်တိုင်း၊ သူတပါးကို ကျူးလွန် ရာရောက်ပါတယ်။ ထို သက်ရောက်မှုတိုင်း (အပြစ်တိုင်း)သည် တန်ပြန်သက်ရောက်မှုရှိသည့် အတိုင်း မည်သည့် အချိန်က ပြုလုပ်ခဲ့ဘူးသော၊ မသိသော အပြစ်များသည် ယ္ခု ပြန်လာခြင်းသာဖြစ်သည်။
သူတပါးမှ နိုပ်စက်ခြင်း၊ သတ်ဖြတ်ခြင်း၊ စသည့် အမျိုးမျိုးသော ဖြစ်ပျက်ခြင်း၊ ခံစားရခြင်းများသည် တန်ပြန်သက်ရောက်မှု များသာ ဖြစ်ပါသည်။
သက်ရောက်မှု အစကို ဖြစ်စေသောအကြောင်း
ထို့ကြောင့် အခု သိတဲ့ အချိန်ကစ၍ အပြစ်ဖြစ် စေသော ပြုမူခြင်းကို ရှောင်ရှားကြရမည်။
အချိန်တိုင်း၊ စက္ကန့်တိုင်း မှာ လူအားလုံးသည် စိတ် ဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ တွေးကြံခြင်း၊
နုတ် ဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ ပြောဆိုခြင်း၊
ကိုယ် ဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ ပြုလုပ်ခြင်း၊ ရှိပါမည်။
ပြုတိုင်း ပြုတိုင်း အပြစ် မဖြစ်စေရန် သိနေရပါမည်။
ယင်းသို့ သိနေခြင်းသည် ဖြစ်ဆဲ၊ ဖြစ်ခိုက်၊(ပစုပ္ပန်)တည့်တည့် သိနေခြင်း ပေတည်း။ သို့မှသာ အတိတ်မှ အညစ်အကြေးများ၊ အနာဂတ် အတွက် လိုလား၊ မျှော်လင့်မှုများ မပါဘဲ၊ အပြစ်ကင်းပေမည်။
ထိုသို့ သိရန် သတိဖြင့် နေထိုင်ရပါမည်။
သတိရှိနေရန် ကျင့်ယူရပါမည်။ ထိုသို့နေထိုင်သူသာ အနာဂတ် တွင် အပြစ်ကင်းနိုင်ပါမည်။
ယ္ခု အေးချမ်းနေသူများမှာ ယခင်က အပြစ် မလုပ်သူများဖြစ်နိုင်ပေမည်။
ထို့ကြောင့် တခြားဝေးဝေးကြည့် ပြီး၊ “ဘာ့ကြောင့်လဲ ဘယ်သူကြောင့်လဲ” လုပ် မနေဘဲ၊ သတိရှိနေဘို့ ကိုယ့်ကို ကိုယ် သိနေဖို့ အရေးကြီးပါကြောင်း၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ မက ဘာသာမရွေး လူသားအားလုံး အချင်းချင်း ရိုင်းပင်း၊ ကူညီ အသိပေးအပ်ပါသည်။
ယ္ခု နိယာမ သည် ဘာသာမရွေး၊ လူမျိုးမရွေး၊ ရာထူးမရွေး၊ နေရာဒေသ၊ အချိန်မရွေး၊ သက်ရောက်မှာ ဖြစ်လို့ လွတ်အောင် ရှောင်နိုင် ကြပါစေသတည်း။
Kyaw Lu Thar said...
မင်းရဲ့ idea တွေ၊ လုပ်ပုံကိုင်ပုံတွေက ဟိုး ၈၈ တုန်းကလိုမျိုး အခြေအနေ မှာဆိုရင်တော့ အလုပ်ဖြစ်နိုင်တယ်။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ မင်းက ကောလဟာလ တွေလောက်ပဲ လုပ်တတ်တာဆိုတော့လေ၊ လူတွေက ဘုမသိ ဘမသိနဲ့ မိုးသီးဇွန်တဲ့ ဆိုပြီး အထင်ကြီးနေရတာ။ အခုအချိန်လို သတင်းတွေ အချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီ ထွက်ပေါ်နေတဲ့ အချိန်မှာတော့ မင်းဘာကောင်မှ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ လူတွေက သိနေကြပြီ။ မင်းက သူများတွေကိုသာ ပြောင်းခိုင်းနေတာ၊ မင်းကကျတော့ ဟိုးအရင် နှစ်အစိတ် ၃၀ ကနည်းတွေထဲကကို မထွက်နိုင်ဘူး။ မင်းကကျန်ခဲ့ပြီ မိုးသီးဇွန်၊ မင်းနောက်မှာ မင်းနောက်ကျောပဲ ရှိတော့တယ်။ bye bye မိုးသီးဇွန်။
27 April 2013 at 21:12